को हुन सिके ? अहिलेसम्मका राजनीतिक गतिविधि यस्ता छन्
Sunday, May 26, 2019 |आइतवार, जेठ १२, २०७६
विशेष - रिपोर्ट , राजनीति
पासाङ्ग ठकुल्ला २८ फागुन ।
पासाङ्ग ठकुल्ला/मनोज कुमार
काठमाडौँ । सरकारले स्वतन्त्र मधेस गठनबन्धनका नाममा अभियान चलाउँदै आएका सिके राउतसँग गत २४ गते राजनैतिक सहमती गर्‍यो । सहमती पछि राउतले अखण्ड नेपालका पक्षमा उभिएको बताइएको छ । यद्यपी उनले यसबारे मुख खोलेको पाइदैन ।
तर उनीसँगको सहमतीपछि सरकारले नराम्रोसँग आलोचना खेप्नु परेको छ । सत्तारुढ दलका केही नेताहरुले पनि सहमतिप्रती असन्तुष्टी जनाइरहेका छन् । राउतका विगतका गतिविधिलाई लिएर सहमतीमा आशंका केही नेताहरुले गरिरहेका छन् ।
सहमती पछि सिके राउतले संका गर्ने ठाउँ पनि दिएका छन् । केही महिना देखी सरकारले राजनैतिक सहमती गरेको अघिल्लो दिन जेलमुक्त भएका थिए । तत्पश्चात उनी मधेस गए ।
स्वागत गर्न हजारौको संख्यामा उनका समर्थकको उपस्थिती थियो । उनीहरुले स्वतन्त्र मधेसको नारा समेत लगाए । यसले नेपालको राजनीतिक वृतमा तरङ्ग पैदा गरेको छ । यता गतिविधिले राउतमाथि संका गर्ने ठुलो ठाउँ समेत दिएको छ ।
को हुन सिके राउत
सप्तरीको महदेवा गाउँमा जन्मेका डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके राउत)ले माध्यमिक तहको शिक्षा छिमेकी गाउँ कट्टीबाट पुरा गरे । यसपछिको अध्ययन नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जापानको टोकयो विश्वविद्यालय र लन्डनको क्याम्ब्रिजमा गरे ।
उनले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा स्नातक गरे । एक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीमा समेत उनी रहे । उनलाई नसोधी व्यवस्थापनले सहायक विभागीय प्रमुख बनाएपछि राजीनामा दिए । त्यसपछि जापान सरकारले दिने मोनबुसो छात्रवृत्ति पाएर उनी जापानतर्फ लागे ।
त्यहाँबाट फर्किएपछि भगवान् खोज्दै भारतका विभिन्न ठाउँमा पुगेको उनल आफ्नो आत्मकथा ‘बैरागदेखि बचाउसम्म’ मा उल्लेख गरेका छन् । भारतबाट फर्केपछि उनी फेरि जापानतर्फ लागे । पढाइको क्रममा उनी बिरामी भएपछि साथीको सहयोगमा अस्पतालबाटै थेसिस लेखे ।
जापानबाट स्नातकोत्तर गरेपछि विद्यावारिधीका लागि राउतले बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा आवेदन दिए र छनोट पनि भए । उनले अमेरिकास्थित नासामा कम्युटर वैज्ञानिकका रूपमा काम समेत गरेका छन् । त्यसपछि उनी सन् २०११ को अन्त्यतिर नेपाल फर्किए ।
युवा इन्जिनियर पुरस्कार, महेन्द्र विद्याभूषण, कुलरत्न गोल्डमेडल, ट्रफिमेनकफ एकाडेमिक एचिभमेन्ट अवार्डजस्ता सम्मानबाट उनी विभूषित भइसकेका छन् ।
राउतको राजनीतिक यात्रा
उनको पृथकतावादी राजनीतिक यात्रा २०६९ बाट सुरु भयो । अमेरीकाबाट फर्कीएपछि मेची–महाकाली यात्रा गरेका उनले मधेसमा पृथकताबादी आन्दोलन सुरु गरे ।
समयक्रमसँगै राउत समर्थकको संख्या पनि बढ्दै गयो । गत असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन उनले जनकपुरमा संविधानको विरोधमा कार्यक्रम नै गरे । त्यसको केही दिन पछि असोज २१ गते रौतहटको गौरबाट उनी पक्राउमा परे ।
अमेरिका बसाईका क्रममा राउतले मधेसी हकहीतका लागि भन्दै गैरआवासीय मधेसी संघ स्थापना गरे । उनी नेपाल फर्कंदा मधेस आन्दोलन सुरु भएको थियो ।
सोही बखत स्वतन्त्र मधेसको विकल्प नरहेको भन्दै राउतसहितको समूहले ‘मधेस अधिकार एवं स्वतन्त्रता गठबन्धन’ स्थापना गरे । गठबन्धनको मूल नारा नेपाली उपनिवेश र रंगभेदको अन्त्य मधेसीको समुचित अधिकार र मधेसको स्वतन्त्रताको प्राप्ति र गणतान्त्रिक मधेसको स्थापना थियो । गठबन्धनको आफ्नै झन्डा बनाएका राउतले मधेसको छुट्टै राष्ट्रगान समेत तयार पारे ।
राउतले फागुन २४ गते सरकारसँग राजनीतिक सहमती गरे । अहिले उनी पृथकताबादी आन्दोलन छोडेर मुलधारको राजनीतिमा अवतरण गरेका छन् ।
थाइल्याण्डका पूर्व प्रधानमन्त्री तीनसुलानन्दको निधन
कतै तपाईं ब्युटी पार्लरबाट रोगहरू त ल्याइरहनुभएको छैन ?
स्मिथको शतकमा अष्ट्रेलियाको सानदार जित
‘रुबिक्स क्यूब’ हल गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका कीर्तिमानधारी
सेयर खरिद अनलाइन सेटलमेन्टमा ४५ बैंक तथा वित्तिय संस्था थप
प्राकृतिक विपतमा परी २६ जनाको मृत्यु
लुम्बिनी भ्रमण बर्ष २०७६ र यसको सफलता आनन्द खनाल
पत्रकारिता मूढेबल नै हो त ? गाेपाल ठाकुर
मे दिवस र सांस्कृतिक ठगी गाेपाल ठाकुर
भारतमा ‘धुम’ मच्याउने नेपाली चेली तेरिया मगरलाई १८ वर्षे जवानीले छोएपछि... (तस्विरसहित)
संविधान विपरीत नहिँडौं
भूकम्पीय सुरक्षामा विशेष ध्यान दिउँ
लोकतान्त्रिक आन्दोलनकाे मर्मअनुसार जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याऊ
01-5244634 (For News) 01-5245077 (For Marketing)